မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁) | Ma Shwe Mi
မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁)
April 17, 2010 at 7:24 pm5comments
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ အကြောင်းကို ရေးမည်ဟု စိတ်ကူးမိသည်မှာ ကြာပြီ။ သို့ရာတွင် မရေးဖြစ်ခဲ့။ သူကွယ်လွန်ပြီးကာလတုန်းက ခင်ပွန်းသည် ဦးအောင်ဇေယျ၊သားဖြစ်သူ မောင်သိန်းတန် နှင့် မောင်မိုးဟိန်းတို့က ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ အမှတ်တရအဖြစ် စာအုပ်ထုတ်မည်ဟု စီစဉ်ခဲ့ကြပြီး ကျွန်တော့ထံ စာမူလာတောင်းတတ်သည်။ ကိုအောင်ဇေယျက
“ ခင်ဗျားဆီက စာမူကိုစောင့်နေတယ်။ ဒေါ်မမလေး အကြောင်းကို စာအုပ်ထုတ်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ စာမူမပါဘဲနဲ့ မထုတ်ဘူး“ ဟုကျွန်တော့ကို အကျပ်ကိုင်သည်။
မောင်သိန်းတန်ကလည်း “ဦးလေးရေးမှဖြစ်မယ် ၊မေမေ့အကြောင်းကို ဦးလေးအသိဆုံး၊ဦးလေးနဲ့အရင်းနှီးဆုံး၊ ဒီတော့…ဦးလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးပါ။ မေ့မေ့အကြောင်းကောင်းတာရော၊မကောင်းတာရော“ ဟုမကြာခဏ လာ၍ ပြောတတ်သည်။ သူ့ သားငယ်မောင်မိုးဟိန်းကလည်း “ဦးလေးဆီက ကော်ပီမရလို့ မထုတ်ရဘူး“ဟု သူ့ထုံးစံအတိုင်း ခိုညည်းသလိုညည်းသံလေးဖြင့် ပြောတတ်သည်။ သူ့သမီးခင်လေးမြင့်က “ဦးလေး မေမေ့အကြောင်းရေးမယ်ဆို ဘာဖြစ်လို့မရေးသေးတာလဲ“ ဟု ကျွန်တော့ကို တဖွဖွ မေးတတ်သည်။
သို့ သော် ကျွန်တော်မရေးဖြစ်ခဲ့။
အခြားကြောင့်မဟုတ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့စိတ်ထဲတွင် အဖုအထစ် တစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်နွယ်ကာ သူ့ခင်ပွန်း ကိုအောင်ဇေယျအပေါ်တွင်လည်း ကျွန်တော် အဖုအထစ်တစ်ခု ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့စိတ်ထဲတွင် ရေးချင်စ်ိတ်မပေါ်။ သူတို့တိုက်တွန်းတိုင်း ရေးမယ် ဟု သာ ပြောလိုက်သော်လည်း ရေး၍ မရ။
အဖုအထစ် ဆိုသည်မှာ အခြားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်နှင့်သူတို့ မိသားစု အထူးသဖြင့် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံကြားက ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး နှင့် ၁၉၄၅-၅၀ တ၀ိုက်မှာတည်းက လူချင်းခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ သူ့အိမ်သည် ကျွန်တော့ စားအိမ်သောက်အိမ်ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ကျွန်တော်သည် သူ့အိမ်မှာပင်သွာ၍ တစ်လကိုးသီတင်း နေလိုက်သေးသည်။ သူ့ ခင်ပွန်း ကိုအောင်ဇေယျနှင့်ကား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ နေခဲ့ကြကတည်းက ခင်မင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ကိုအောင်ဇေယျ တောခိုရာမှပြန်လာတော့လည်း ကျွန်တော်နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်သည်။ ထိုခင်မင်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကွယ်လွန်ချိန် အထိ၊ယနေ့အထိ အခြေအနေမပျက်ရှိနေသေးသည်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံနှင့် ကျွန်တော့ဆက်ဆံရေးသည် စာပေမိတ်ဆွေသဘောမျှသာမက ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း မိသားစုချင်းပါ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါသည်။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည် အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ရှိလျှင် ကျွန်တော်နှင့် လာတိုင်ပင်သည်။ ကျွန်တော့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းကိစ္စရှိလျှင် သူတို့နှင့် တိုင်ပင်သည်။ တစ်ခါတရံတွင် ကျွန်တော်သည် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ အိပ်သည့်ကုတင်ပေါ်သို့ တက်အိပ်သည်အထိရင်းနှီးကြသည်။
သူ့ ခွင့်ပြုချက်အရ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ အ၀တ်ဘီရို ကိုဖွင့်ပြီး ကျွန်တော်လိုချင်သည့် ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်၏လက်ရေးဖြင့် ရေးထားသည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရှာဖူးသည်။ ထိုစဉ်က သူ့အ၀တ်ဘီရိုကိုဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားသည်။ သူ၏ အ၀တ်ဘီရိုမှာ လေးဆင့်ရှိသည့်ကျွန်းဗီရိုကြီးဖြစ်ရာ ထိုဗီရိုကြီးထဲတွင် အ၀တ်အစားတွေ အပြည့်။ ထဘီတွေချည်းပင် အထည်သုံးလေးရာလောက်၇ှိမည်ထင်သည်။ဗီရိုအောက်ဆုံးတစ်ထပ်လုံး ထဘီတွေအပြည့်။
သူတို့အလုပ်မှပြန်လာသည့်အခါတွင် အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည့်ကျွန်တော့ အားစာအုပ်တွေ့ ပြီလားဟု သူတို့ကမေးကြသည်။
“စာအုပ်တော့မတွေ့ဘူး။ ထဘီတွေပဲတွေ့တယ်“ဟု ကျွန်တော်ကနောက်သည်။
“ဖွတော့မဖွပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲမှာများ မှတ်တမ်းစာအုပ်ရှိသလားလို့ လိုက်ရှာရတာပေါ့။ အပေါ်အဆင့်တွေမှာမရှိတော့ အောက်ဆုံးအဆင့် ကိုလိုက်ရှာတာပေါ့။ အဲဒီမှာလည်း မတွေ့ ပါဘူး။ ထဘီတွေချည်းပါပဲ။ ထဘီတွေကလည်းများလှချည်လား။ ဘယ်နှစ်ထည်များလဲ မဆိုနိုင်ဘူး“
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးက ဆယ်လက်မလောက်ရှိသည့် မအုန်းမယ် ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးကိုကောက်၍ မီးညှိရင်း
“အလိုလေး များလှချည်လား ဒေါ်မမလေးရာ။ ဒါတွေကိုအကုန်ဝတ်နိုင်လို့လား ။ တချို့ကောင်မလေးတွေများ သုံးလေးထည်နဲ့ ပြီးနေရတာ။ ဒေါ်မမလေး ထဘီက မများလွန်းဘူးလား“
“အကုန်တော့မ၀တ်တော့ပါဘူး။ တချို့ ထဘီတွေက ကျွန်မငယ်ငယ်အပျိုတုန်းက၀တ်ခဲ့တဲ့လုံချည်တွေ။ တချို့လည်း တခါနှစ်ခါပဲ ၀တ်ဖူးသေးတယ်။ နောက်တော့ မ၀တ်ချင်တော့တာနဲ့ မ၀တ်တော့ဘူး။ ဒီအတိုင်းသိမ်းထားလိုက်တာပဲ။ နောက်ထပ် အသစ်အဆန်းပေါ်တော့လည်း ၀ယ်ပြီးဝတ်တဲ့အခါဝတ်ပေါ့။ မ၀တ်ရသေးတဲ့ထဘီတွေလည်းအများကြီးကျန်တာပေါ့“
ကျွန်တော်က အ၀တ်အစားအဆန်းအပြားဝတ်ချင်း၊အများအပြားထားရှိချင်းတို့ကို အပြစ်ဆိုဝေဖန်သည်။
“ဒါကကျွန်မရဲ့ ၀ါသနာကိုး၊ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ကျွန်မငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကောင်းကောင်းဝတ်ချင်တယ်၊ကောင်းကောင်းနေချင်တယ်။ရှင်ကတော့ ဘူဇွာလို့ ပြောချင်ပြောမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ကျွန်မက အ၀တ်အစားဝါသနာပါတာကိုး“
တစ်ခါကလည်း သူတို့တွေအလုပ်သွားနေစဉ် ကျွန်တော်သည် သူတို့ လင်မယားအိပ်ခန်းထဲသို့ ၀င်နေခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်တော့အားဆိုင်ရာတို့ကလိုက်လံရှာဖွေနေသဖြင့် သူတို့ အိမ်သို့ သွား၍ ရှောင်တိမ်းနေရသည်။ ဘောက်ထော်ပြည်သာယာလမ်းသူတို့အိမ်မှာ လူသူအဆက်အသွယ်ဝေးသည်။ ချောင်ကျသည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့အိမ်သို့ သွား၍နေချင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့ ၏ဧည့်သည်တွေကတော့ လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံက အလုပ်သွားပြီဆိုလျှင် ကျွန်တော့အား အိပ်ခန်းထဲသို့သွင်းထားပစ်ခဲ့ကာ သော့တစ်ချောင်းပေးထားတတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်သည် သူတို့အိပ်ခန်းထဲက ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏မှန်တင်ခုံကို သတိပြုမိသည်။ မှန်တင်ခုံပေါ်တွင် အလှအပပစ္စည်း အကောင်းစားတွေအပြည့်။ ရက်ဗလွန်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးရောင်စုံ၊ခရစ်စယန်ဒေါ ရေမွှေးပုလင်းဆိုက်မျိုးစုံ၊ပွန်း ယာ့ဒ်လေ စသော ပေါင်ဒါအမျိုးစုံ။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည် သူ့ကိုယ်သူဖိုသီဖတ်သီဖြင့်ဘယ်တော့မှလူမြင်မခံ။ သူ့ကိုကြည့်လိုက်လျှင် အမြဲတမ်း ကြော့လွင်နေအောင် ၀တ်စားဆင်ယင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်လော်လီဆန်းပြားသည့် အ၀တ်အစားမျိုးတော့ဝတ်လေ့မရှိ။ ထိုစဉ်ကအင်ဒိုနီးရှားဝမ်းဆက်တွေ ခေတ်မစားသေး။ သို့သော် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည် ၀မ်းဆက်ကို ၀တ်နေပြီ။ သူဝတ်သည့်ဝမ်းဆက်မှာ အရောင်ရင့် အရောင်မှိုင်းများဖြစ်သဖြင့် လေးဆယ်ကျော်သူ့အရွယ်နှင့် လိုက်ဖက်ယုံ ၀တ်စားဆင်ယင်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
သကြံန်လက်ဆောင်	မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၂)
1. ကိုထိုက် | June 17, 2010 at 11:22 pm
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် အစ်မရေ။
ဆရာ မြသန်းတင့် ရဲ့ “ ကျွန်တော်နဲ့ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး” ကို အခု အစ်မ
ကျေးဇူးကြောင့် ဖတ်ခဲ့ရပြီ။ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဆိုဒ်ကို ညွှန်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုဘိုဘိုလန်းစင် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အစ်မလည်း စာကောင်းပေမွန် တွေ များများတင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း
2. မောင်ကိုကို | June 14, 2010 at 9:39 pm
ငယ်တုန်းက အ၀တ်များ ဘယ်သူမှ မပေးပဲသိမ်းထားမိပါသည်
3. yawnetthan | April 22, 2010 at 9:30 pm
4. mm thinker | April 17, 2010 at 9:32 pm
ကိုဘိုဘိုလန်းစင် ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ညွှန်းတာနဲ့
အကြွေးထား ဖတ်ဖို့ စာရင်းတို့သွားပါတယ် အစ်မရေ
5. mashwemi | April 18, 2010 at 10:34 pm
လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုသင်ကာ 🙂